Maxaa Ka Cusub Bay Iyo Sh/hoose?
Dhageyso Xarakada Al-Shabaab oo Ka Hadashay Dagaalkii Khasaaraha Badan Dhaliyay Ee Ka Dhacay Hiiraan.
Axmed Cabdulle Jimcaale Oo Lagu Khaarajiyay Magaalada Muqdisho.
Dhageyso: Xaaladda Caafimaad Ee Sheekh Aadan Sunne Oo Laga Dayrinayo Xilli Bishii 7-aad Uu uxiranyahay Maamulka ‘Somaliland’
Labo weerar oo loo geystay ciidamada Itoobiya iyo maamulka Koofur Galbeed ayaa maanta ka kala dhacay gobolada Bay iyo Shabeelaha hoose iyadoo faahfaahin laga helayo khasaarihii ka dhashay. Haddaan ku horreyno gobolka Bay, waxaa qarax lala beegsaday kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo marayay degaanka lagu magacaabo Yurkud, halkaasoo looga gubay […]
Sheekh Guuleed Abuu Nabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee Hiiraan oo waraysi gaar ah siiyay Idaacadda ku hadasha Afka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee Andalus ayaa faafahin ka bixiyay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada Maxaas ee gobolkaas. Sheekha ayaa sheegay in dagaalkaas ay la galeen ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah iyo […]
Xoogag hubeysan ayaa markale magaalada Muqdisho ku dilay mid kamida odayaashii soo xulay xildhibaanadda Baarlamaanka dowladad Federaalka Soomaaliya. Maanta Barqadii ayay xoogag bastoolado ku hubeysan waxay xaafadda Siigaale ee degmada Hodon ku dileen Axmed Cabdulle Jimcaale oo kamid ahaa Odayaashii magaalada Jowhar uga qeyb qaatay soo xulidda xildhibaanada Baarlamaanka DF-ka. […]
Allaha soo daayee Sheekh Aadan Sunne ayaa ku xanuunsanaya Xabsi kuyaal deegaanka Mandheera ee duleedka magaalada Hargeysa. Sheekh Aadan oo aan wali wax maxkamad ah lasoo taagin xukunna uusan ku dhicin ayay saraakiisha Maleeshiyaadka RRU waxay ku hayaan xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Mandheera wuxuuna wajahayaa xaalado caafimaad oo aad […]
Gudoomiyaha Baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay mooshinka laga keenay iyo khilaafka hadda ka dhex jira mas’uuliyiinta dowladda. Jawaari wuxuu sheegay in mooshinka isaga ka dhanka ah uu wado ra’iisul wasaaraha dowladda Xassan Cali Kheyre, iyadoo ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye. Wuxuu […]
Ku Dhawaad 20 Askari oo Lagu Dilay Dagaal Ka Dhacay Maxaas.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in askar ka tirsan DF lagu dilay dagaal Jimcihii ka dhacay deegaanka Bulacle oo qiyaastii 20 KM dhanka Koonfur Bari uga beegan magaalada Maxaas. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay weerar xooggan ku qaadeen saldhig […]
Diiradda Jimcaha waa barnaamin muhim ah oo lagu lafa guro mowduuc muhim ah, waxaana todobaadkan lagu falanqeeyay heshiiskii Dekedda Berbera iyo saameynta durbadiiba ka dhalatay iyadoo si gaar ah loo milicsaday murtida ku jirto hadalada ay DF iyo S/land is weydaarsanayaan. https://a.top4top.net/m_805dsmhk1.mp3
Ku Dhawaad 10 Askari oo Amisom Looga Dilay Dagaal Ka Dhacay Sh/hoose.
Dagaal ayaa waxa uu maanta ciidamada Xarakada Al-Shabaab iyo kuwa Amisom ku dhex maray gobolka Shabeelaha hoose kaasoo lasoo warinayo inuu sababay khasaare dhimasho, dhaawac iyo hanti intaba. Dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii kolonyo ka tirsan ciidamada Amisom ay Xarakada Al-Shabaab kala kulmeen weerar jid gal ah, xilli […]
Askari Muqdisho Lagu Dilay Kadibna Qorigii Laga Qaatay.
Askari ka tirsan DF ayaa maanta lagu dilay degmada Wada jir ee magaalada Muqdisho iyadoona laga qaatay qoigii uu watay sida ay ku warameen dad goob joog ahaa. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Nasteexo kadib markii rag hubeysan ay dhowr xabadood ku dhufteen askariga, waxaana ay si degdeg […]
Al Shabaab Oo Sheegatay Mas’uuliyadda Qarax Lagu Dilay Taliyihii Qeybta Miina Baarista Maamulka ‘Puntland’.
Wararka ka imaanaya deegaanka Galgala ayaa sheegaya in qarax miino lagu dilay laba sarkaal oo katirsanaa khubarada Miina Baarista maamulka isku magacaabay ‘Puntland’. War kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas’uuliyadda qarax lagu dilay Taliyihii ciidamada Miina Baarista maamulka Puntland oo lagu magacaabi jiray Col.Xidig Cabdullaahi Cali Geyre […]